Mayelana nalabo abatshala imifino nokuthi "yini abayidlayo", ukuphikisana okuningi. Abanye bakholelwa ukuthi izitshalo zemifino ziyi-herbivores, zihlanganisa iphasley eyodwa kusukela ekuseni kuze kube sebusuku, kanti abanye bayazibuza ukuthi kungani benqaba kule saumoni noma izimbiza ezingenabungozi, okungukuthi akuzona inyama. Ake sibone, kungani izitshalo zemifino zizibheka ngokomoya ngaphezu kokudla inyama? Ngokuvamile, ukuba izindlela zemifino hhayi ukudla izidumbu zezilwane.
Kulolu hlobo lwemikhiqizo evinjelwe inyama, hhayi inyama yenkomo kuphela, inyamazane, ingulube nenkukhu, kodwa futhi nezinhlanzi nama-crustaceans. "I-Catastrophe!" - i-salood ejwayelekile yase-Ukraine icabanga. "Akunjalo neze!" Ibuyisela imifino. Izithelo, imifino, okusanhlamvu, i-tofu neminye imikhiqizo ye-soy, amantongomane, amaqanda, ubisi, ushizi, i-yoghurt ... Uhlu oluhle lwezinhlinzeko zemenyu egcwele luphuma.
Abaningi bamelela izitshalo, njengabafighters abaphakade, ukuvikela amalungelo esilwane. Okufanelekile, ukulwa kufanele kube ngumphakathi. Ngaphambi kwamehlo kukhona isithombe sexuku elithukuthele eligcoba upende lwamagazi e-fur fur coat. Ngokuphumelelayo, kodwa konke lokhu kuyingozi kakhulu. Yiqiniso, izitshalo zicabanga ngezinkomo ezingenakuzivikela ezihlakalweni zokuhlaba. Kodwa-ke, uma ubumba ngokujulile, inyama yokudla iyabulala iplanethi yethu.
Imfuyo iyimbangela yokukhishwa kwe-methane emkhathini, futhi ukukhiqizwa kwemikhiqizo yenyama emapulazini kungu-1/5 we-total carbon dioxide emissions eyenza ukufudumala kwezwe. Ngaphezu kwalokho, ukuzaliswa kwezilwane ukuze kudliwe kudinga amanzi angaphezulu okuphindwe kabili, uma kuqhathaniswa nokukhiqizwa kwe-1 kg yezithelo noma imifino.
Sifundiswa kusukela ebuntwaneni ukuthi umzimba womuntu udinga inyama ukuze isebenze kahle. Njengokuba ngaphandle kwakhe akakho amandla nokukhuthazela. Noma kunjalo, abaningi abanomsoco wesimanje bathi ukudla okunomsoco kuyathinta kokubili impilo yomzimba nengqondo yomuntu. Yingakho izitshalo zizibona zidla ngokomoya. Futhi lezi zigwebo azikho lutho. Ngokwesibonelo, abagijimi baseGrisi lasendulo babekhetha ukudla amajikijolo ewayini, amantongomane, ushizi nesinkwa sommbila. Kodwa ukudla kwama-gladiator aseRoma kwakubandakanya amaqebelengwane asebhali ngamafutha omnqumo. AmaLegionaries aseRoma, anqoba ama-expanses amakhulu avela e-Atlantic eya eLwandle lweCaspian naseBritish Isles eya eGibhithe, futhi ayebuka ngendlela efanayo.
Ngaphezu kwalokho, ososayensi bakholelwa ukuthi amazinyo omuntu kanye nesimiso sokugaya umzimba kufana nemifino yezinkomo kunezidakamizwa. Ubumsulwa bomuntu bude kakhulu kunezinambuzane zezilwane ezidliwa, kanti ngisho nangokwenza kahle kwazo, inyama ehlanjululwayo ihlala emzimbeni isikhathi eside, ikhulula izinto ezinobuthi obuyobhubhisa igazi nomzimba wonke. Kuyaziwa ukuthi abantu abaye bavotela inyama bancane amathuba okubhekana nezifo zenhliziyo (infarction myocardial, strokes).
Lokhu kungenxa ye-cholesterol ephansi. Kodwa ngesikhathi esifanayo, abameleli bokudla kwemifino bangase babe nezinkinga ngomuthi wamathumbu (i-colitis, enteritis, gastritis, njalonjalo). Ngakho-ke, ngaphambi kokuba uphelele ngokuphelele konke okusanda kugijima futhi kugijima, kubalulekile ukuba uhlole ngokujwayelekile nodokotela. Futhi kuyadingeka ukwenza isaphulelo esimweni sezulu. Noma kunjalo, izimila zemvelo zazalwa emfudumeni weNingizimu. Enyakatho yabantu, imifino encane nezithelo ekudleni kwayo ngenxa yezizathu zezulu. Awu, ungenzi imifino e-Chukchi, kungakhathaliseki ukuthi uzama kangakanani!
Ukudla inyama yezilwane (abantu badla ikakhulukazi ama-herbivores), sithola amandla kabili we-Sun. Ekudleni okunjalo, akwanele amavithamini namaminerali abalulekile, futhi aqukethe amaprotheni amaningi kunesidingo somuntu. Ukuze umzimba uvuselele ekudleni kwemifino, uzodinga isikhathi. Uma ushiya amaprotheni ezinyamazane, udinga ukuwuthatha isitshalo. Amaphrotheni anjalo atholakala kumantongomane, ama-peas, ubhontshisi, i-lentile neminye imikhiqizo. Uma umba kancane emibhalweni bese uthola ukuthi imikhiqizo iqukethe, ungakha imenyu yakho efanele, ukuze umzimba uthola zonke izinto ezidingekayo.
Ngenyama, umuntu uthola amino acid amaningi namaminerali abalulekile angatholakali ekudleni kwezitshalo. Isibonelo, i-cholesterol, edingekayo ekusebenzeni okujwayelekile komzimba (umsebenzi wezocansi, libido, umsebenzi wokubeletha kwabesifazane nabesilisa). Izinga le-cholesterol lingalawulwa ngokunciphisa amaphesenti omthamo wamafutha emikhiqizo ehambisanayo nokudlala imidlalo. Ngokuvamile, zonke izinkinga zabantu abadla inyama zihlotshaniswa nokudla okungalawulwa nokungafaneleki kwenyama, kanye nokuhlanganiswa kwemikhiqizo.
I-Lacto-vegetarianism ivumela ukusetshenziswa kwemikhiqizo yobisi yobisi nokuvutha okunikeza umzimba nge-calcium.
I-Ovolacto-vegetarianism, ngaphezu nobisi, ibuye ivumele ukudla kwamaqanda. Umthombo we-calcium ne-vitamin B12.
Ukudla kwe-frutorianism kusekelwe ezitsheni namajikijolo. Yiqiniso, okusanhlamvu, amantongomane ngisho namatamatisi anezinambuzane avunyelwe.
Ukunakwa sicela! Ngokuvamile, izitshalo zididekile ngezimvini - abalandeli bokudla okunamandla kakhulu. "Akumukeleki ukudla okunamehlo," wacabanga uPythagoras. Futhi ngokwemithetho yemifino eqinile, konke okuyizidalwa ezinamehlo. Ngakho-ke, i-vegans inqabe nje kuphela inyama yezilwane, kodwa futhi kusukela kumikhiqizo yobisi, amaqanda, i-caviar, uju (etholakala "ngokuxhaphazwa" kwezinyosi). Ngaphezu kwalokho, abagqoki izinto ezenziwe ngoboya, isikhumba kanye ne-cashmere.
Ngeshwa, kwaba nombono wokuthi baba izitshalo kuphela ngoba kuyimfashini manje. Enye inguqulo ezithakazelisayo ukuthola futhi ukucasula wonke umuntu ozungezile. Ngokungangabazeki, kunezibonelo ezihlukahlukene ... Umngane wemifino ophikelela ukuthi ufuna imfucumfucu efanayo, kuphela ngaphandle kwenyama, uyakwazi ukuletha ngisho nabalindi abangenakwenzeka ukushisa okumhlophe. Isoka elingenzeka, ukuguqula isidlo esinokuthula sibe ingxoxo ngokuphathwa kabi kwezilwane, kuzonakalisa ubusuku obuthandana kakhulu. Kodwa eqinisweni, kaningi asiqapheli ngisho nokuthi othile ovela enkampanini yethu useyisikhathi eside sesimifino. Uma ubuza ozakwabo nabangane, ke, kholwa kimi, uzomangala ukuthola ukuthi abaningi babo abadli inyama. Futhi okubaluleke kakhulu, ngeke babeke izintandokazi zabo kwabanye. Inkinga kuphela lapho izitshalo zemifino zendawo zibhekana nazo uma ziphuma ziyimenyu encane yemifino ezindaweni zokudla. Ngesikhathi sokuthunyelwe okuhle isimo siyathuthuka, futhi kulo lonke unyaka lisahle kakhulu. Kodwa ngisho nakulolu cala, ungaphumelela kuleso simo ngokuyala i-risotto yama-classic nemifino noma isobho semifino elimnandi.
Izakhiwo eziwusizo zokujamu
Harm and benefit of fat fat
Umlingani, njengengxenye yekhofi ye-banal kanye netiye
Okumnandi, uju oluhlwabusayo futhi olunempilo
Banana Pie ngeCaramel
Imfashini yabesifazane. Amathrendi entwasahlobo-ehlobo 2010
Amaqanda e-Fusion aqokiwe
Okudingayo ukwazi owesifazane ukuze angamthathi umyeni wakhe
Amabhilikri abomile nge-ginger
Izinwele zesinyathelo sokuqala: indlela yokukhetha izicathulo zokuqala zengane yakho